के बच्चा नभएर टेस्ट्युब बेबीको सोच गर्दैहुनुहुन्छ ? त्यसो भए जान्नुहोस् यी कुरा - Sabal Post
के बच्चा नभएर टेस्ट्युब बेबीको सोच गर्दैहुनुहुन्छ ? त्यसो भए जान्नुहोस् यी कुरा
काठमाडौँ – विवाह गरेपछि सन्तानसँग खेल्ने रहर जो कोहीमा हुने गर्छ । तर अपसोच कुनै जोडीको लागि बच्चा जन्माउने र बच्चासँग खेल्ने रहर सपना जस्तै बन्छ । यस्तै पिडामा रहेका व्यक्तिहरुले सन्तान जन्माउने अनेक किसिमका विक ल्पहरु खोज्ने गर्छन् । त्यसको विकल्प हो टेस्ट्युब बेबी । नेपालमा पहिलो पटक टेस्ट्युबको प्रयोगमा २०६० सालमा बच्चा जन्मिएको थियो ।यो प्रविधि स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. भोला रिजालले नेपालमा पहिलो पटक भित्र्र्याका हुन् । रिजालको अनसार ओम अस्पताल मा मात्र एक हजार भन्दा बढी टेस्ट्युब बेबीको जन्म भइसकेको छ । तर नेपालीले मात्र नभएर विदेशीहरुले समेत ओम अस्पतालमा आएर टेस्ट्यब बेबी जन्माएका छन् ।तर यो अवस्थामा आइपुग्दा पनि नेपाली समाजमा अझै यसको बारेमा मानिसहरु अनविज्ञ रहेका छन् । त्यसैले आज हामी टेस्ट्युब बेबी के हो भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छाैँ ।स्त्री रोग विशेषज्ञ भोला रिजालको अनुसार बाबूको शुक्रकिट र आमाको डिम्ब टेस्ट्युबमा निकालिने भएको कारण टेस्ट्युब बेबी भनिएको हो । यसलाई अंग्रेजीमा इनभित्रो फर्टिलाइइजेसन भनिन्छ । भिभो फर्टिलाईजेसन भनेको आमाको गर्भमा फर्टिलाइज गर्ने र भित्रो भनेको बाहीर गर्ने हो ।
बाबूको शुक्रकिट र आमाको डिम्बलाई गर्भाशय भन्दा बाहिर फर्टिलाइज गर्ने भएकाले यसलाई फर्टिलाइजेशन भनिन्छ । तर फर्टिलाईज गर्दा आमाको डिम्ब र बाबूको शूक्रकिट मेल हुुनु जरुरी रहेको छ ।यसो गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले आमा र बाबू दुबैलाई इ न्जेक्सन दिएर डिम्ब र शुक्रकिट निकालिन्छ । यसो गर्नुको कारण हो आमा र बाबू बाट सबैभन्दा बढी डिम्ब र शुक्रकिट निस्कियोस । त्यतिबेला आमा र बाबूलाई इन्जेक्सन दिएर लट्याइन्छ । डिम्ब र शुक्रकिटलाई टेस्ट्युबमा २ मिनेट राखिन्छ । त्यसपछि डिम्ब र शुक्रकिटलाई एक्रिपेट पेट्रिडिस सिसाको विशेष भाँडोमा ३६ घण्टा राखिन्छ । यसो गर्दा डिम्ब र शुक्रकिट फर्टायल अर्थात सेचन हुन्छ । फर्टायल भइसकेपछि भ्रुण बन्नको लागि योग्य वातावरण भइसक्छ । यसरी सेचन भएको भ्रुणलाई पुन आमाको गर्भासयमा राखिन्छ । जसलाई एमरिओ ट्रान्सफर भनिन्छ । यसरी नै विस्तारै अन्य बच्चा जस्तै क्रमिक रुपमा बच्चाको विकास हुन्छ र टेस्ट्युब बेबी जन्मन्छ ।टेस्ट्युब बेबी नै किन प्रयोग गर्ने : जब बाबूको शुक्रकिट र आमाको डिम्बासय मिल्दैन् त्यो बेलामा गर्भमा बच्चा रहन सक्दैन् । त्यसकारण टेस्ट्युब बेबीको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । बाबूले शुक्रकिट खसा ल्न नसक्नस वा आमाको डिम्बाससम्म पुर्याउन आमाको नसामा आएको समस्याको कारण यस्तो बाधा उत्पन्न हुने गर्छ ।
त्यसकारण टेस्ट्युब बेबीको आवश्यकता पर्छ । जतिबेला नेपालमा टेस्ट्युब बेबीको शुरु भएको थियो त्यतिबेला विश्वमा जन्मिएकी टेस्ट्युब बेबी २५ वर्ष भइसककी थिइन् । यतिमात्र हैन् बच्चा नहुने अन्य समस्याको कारण बच्चा जन्माउनेहरुको लागि टेस्ट्युब बेबी बर दान साबबित बनेको छ । त्यसकारण अब बच्चा भएनन् भनेर नि : सन्तान बस्नुपर्ने अवस्था सकिएको छ । हरेक वर्ष जुलाई १० लाई निसन्तान दिवसको रुपमा मनाइदै आएको छौँ ।ओम अस्पतामा मात्र हैन अहिले नेपालका थुप्रै अस्पतालहरुले टेस्ट्युव बेबी जन्मा उने गरेका छन् । तर नेपालमा पहिलो पटक ओम मनि तमाङको टेस्ट्युब बेबीको माध्यबाट जन्म भएको थियो । नेपालका केही प्रसुति गृहले समेत टेस्ट्युब बेबीको प्रयोग गर्न थालेको छ । आम अस्पतालले भने तीन लाख देखि साँढे तीन लाख सम्ममा टेस्ट्युब बेबी जन्माउने गरेको छ । तर कतिपय बच्चा यो भन्दा कम मुल्यमा पनि जन्माउने गरिएको छ । टेस्ट्युब बेबी कै लागि भारत जाने हो भने साढे ५ लाख भारु खर्च लाग्छ ।टेस्ट्युब बेबी जन्माउनको लागि लिमिटेसन चाही आवश्यक रहेको हुन्छ । यसको लागि आमाबाट डिम्ब र बाबू बाट गरि सक्षम सुक्रकिट निकाल्नु जरुरी रहेको हुन्छ । त्यतिमात्र भएर कहाँ पुग्यो र आमामा बच्चा राख्न सक्नृ क्षमता भएको पाठेघरको पनि जरुरी रहेको हुन्छ । अन्य शारिरिक कारण स्वास्थ्यमा असर पर्नु स्वभाविक हो तर आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा भने कुनै प्रकारको असर देखिदैन् ।
रोटरी क्लब अफ बुटवलको नियमित बैठक क्लब…